कोरोना त्रास - सतर्क रहौं , सद्भाव बाडौँ | himalayakhabar.com
| Friday April 3rd, 2020
कोरोना त्रास - सतर्क रहौं , सद्भाव बाडौँ
✍️ बिटु केसी
✍️ बिटु केसी | 19th Mar 2020, Thursday | २०७६ चैत्र ६, बिहीवार १३:३०
रूप , विद्वत्ता, धन या कुनै चिजको पनि घमण्ड गर्नु मुर्खता हो । जति नै शक्तिशाली भएपनि के नै हुँनेरहेछ र ! मानिसको तागत र ल्याकत विवेक र बुद्धिका घमण्ड गर्नेहरुलाई अदृश्य भाइरसले पराजित गरेको छ, चुरचुर पारेको छ आज ।
यो प्रकृति, यो ब्रम्हाण्ड सबैको लागि समान छ । यसलाई प्रेमपूर्वक उपयोग गरे अत्यन्त उपकारी छ । जब जब यसको चरम दोहन हुन्छ तब तब विनाश भएको छ ।
मान्छे हामी कति छली, कपटी र स्वार्थी भएका छौं, एकचोटी आफ्नै अन्तर मनलाई नियालौं । हाम्रा सामान्य बोली, व्यबहार कस्तो छ ? कति सत्य बोल्छौं हामी, कति झुठा छौं ?
यति भन्नुछ - अहिले विश्वभर फैलिएको महमारीको यो सङकटको अवस्थामा हामी एक हौं । प्रेम र सद्भाव साटौं । आफ्ना मान्छेहरुलाई एक कल फोन गरेर सोधौं - कस्तो छ त्यता ?
साथीभाईलाई फोन नसके मेसेज गरौं । आएका मेसेजको कमसे कम रेसपन्स त गरौं । आफ्नो तुजुक देखाउने , मै हुँ भन्ने बेला यो होइन । सकिन्छ भने यस्तो तुजुक कहिल्यै नदेखाऊँ । यो नै मानवीय धर्म हो । आफूले जानेका थाहा पाएका राम्रो उपयोगी कुरा शेयर गरौं । आफ्नै मान्छे कोही तनावमा हुन सक्छन् तपाईंको राम्रो बोली व्यबहारले उसलाई औषधीको काम पनि त गर्न सक्छ । यो आपतको घडिमा जसरी सकिन्छ अरुलाई सहयोग गरौं । कतिको रोजगारी गएको छ , व्यापार व्यवसाय बन्द भएको अवस्था छ । डर त्रासले आतंकित भएकाहरुलाई सुझाव र सल्लाहले पनि ठुलो राहत दिनेछ ।
कोरोना भाइरसले विश्वलाई नै बिरामी पारेको छ । संक्रमण हुनेहरु मात्र होइन नहुनेहरु पनि त्रास र तनावले बिरामी हुन सक्ने स्थिति छ ।
परिस्थिति प्रतिकूल हुँदा अनेक भामरी आइलाग्न सक्छन , अनेक अपराधहरु बढ़न सक्छन सर्तक होऔं । त्यस्ता भामरी थाहा हुने वितिक्कै अरुलाई जानकारी गराऔं । एक्लै नबसौं । धेरै भाइरसका समाचार सुन्ने , हेर्ने र त्यही कुरा गरिरहदा तनाव झन बढ्ने रहेछ । आफ्नो ध्यान सकेसम्म अन्त मोड़ने सक्दो प्रयासमा छु म पनि । हाँसो अपरिहार्य छ । त्यसैले हंसी ठट्टाका चुट्किला , हास्य व्यंग्य भिडियो , नाँच , गान र सिनेमा हेरेर आफ्नो ध्यानलाई सकेसम्म अन्तै मोड़ने कोशिस किन नगर्ने ? यो समयमा बरु घरका र करेसा बारीको कामको लाभ उठाऔं ।
समय बलवान हुन्छ , धैर्य गरौं । विपतको समय लामो नरहला प्राथना गरौं ।
सरसफाई सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता हो । यसलाई जीवनमा सदैव अंगालौं ।
सकेसम्म सुरक्षित रहौं । स्वास्थ्य रहौं । सरल बनौं , सहज जीऔं ।
आफु बाँचौं र अरुलाई पनि बचाउने प्रयास गरौं ।
कोरोनाको महामारीबाट १७७ देश प्रभावित, ९३९० ले ज्यान गुमाए
२०७६ चैत्र ६, बिहीवार १०:३०
काठमाडौँ । चीनको वुहान सहरबाट फैलिएर विश्वका १७६ देशमा महामारीको रुप लिएको कोरोनाभाइरस (कोभिड-१९) को संक्रमणबाट बिहीबार राति १० बजेसम्म ९३९० जनाको मृत्यु भएको छ ...
७२ घन्टामा तयार भयो भरतपुरमा कोरोना विशेष अस्पताल
२०७६ चैत्र ७, शुक्रबार ००:००
अत्यावश्यक वस्तुको उत्पादन र आयोजना सञ्चालन गर्न दिने निर्णय
२०७६ चैत्र २०, बिहीवार ०९:०० पूरा पढ्नुहोस् »
कोभिड–१९ :सङ्क्रमण परीक्षण र पहिचानमा जोड दिन मोदीको आग्रह
२०७६ चैत्र २०, बिहीवार ०७:३० पूरा पढ्नुहोस् »
उत्तर कोरिया ‘कोरोना फ्रि’ रहेको स्वास्थ्य अधिकारीको दाबी
२०७६ चैत्र २०, बिहीवार ०७:१४
भारतीय क्रिकेट खेलाडी गम्भीरले दुई वर्षको तलब राहत दिने
२०७६ चैत्र २०, बिहीवार ०७:००
नेपालमा थप एक जनामा कोरोना भाइरस पुष्टि, संक्रमितको संख्या ६ पुग्यो
२०७६ चैत्र २०, बिहीवार ०६:१५
अस्ट्रेलियामा कोरोना भाइरस प्रतिरोधी खोपको परीक्षण सुरु
२०७६ चैत्र २०, बिहीवार ००:५८
स्वतन्त्रता - शैलेश आचार्य
२०७६ चैत्र १९, बुधवार ११:४७
चीनबाट औषधिजन्य सामग्री ल्याउने ‘विवादित’ कम्पनीसंँगको सम्झौता रद्द
२०७६ चैत्र १९, बुधवार ०७:१४
चीनबाट ल्याइएका र्‍यापिड टेष्टकिट प्रयोग नगर्न मन्त्रालयको निर्देशन
२०७६ चैत्र १९, बुधवार ०७:०५
दिल्लीका मुख्यमन्त्री केजरीवालद्वारा राहतको घोषणा
२०७६ चैत्र १९, बुधवार ०६:३६